Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - Porn နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်အပေါ်နယူးလေ့လာမှုတစ်ခုဖယောင်းရုပ် Banana [အတုအသီး] ဖြစ်ပါတယ်
By Linda Hatch, Ph.D
ငါခေါင်းစဉ် Prause နှင့် Pfaus အားဖြင့်မကြာသေးမီကဆောင်းပါးဖော်ပြရန်အတုအသီး၏ဥပစာကို ရွေးချယ်. မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှု, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူလိင်လှုံ့ဆော်မှု Associated ကိုကြည့်ရှုခြင်း။ ငါမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငှက်ပျောသီးနှင့်အတူမည်သည့် phallic အမှတ်လက္ခဏာတွေ၏ပေမယ့်လက်ရှိစာရေးသူအတုကောက်ချက်ကြောင့်ဤအမှုကိုပြု၏။ ဒီ:; အွန်လိုင်းဂျာနယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ (04 / sm2015 Doi 10.1002 / 2.58) တွင်ထုတ်ဝေသည် ဆောင်းပါး porn သုတေသနအတွက် Prause ၏ကြိုတင်ကြိုးစားမှုများမှတွေ့ရှိချက်များကိုစုစည်းထားပုံရသည်။ ပိုမိုနီးကပ်စွာစစ်ဆေးသည့်အခါ၎င်းဆောင်းပါးသည်မည်သည့်အစစ်အမှန်ပစ္စည်းမှမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ဒီကြိုးပမ်းမှုအပေါ်အခြေခံပြီး, စာရေးသူ porn အန္တရာယ်ကင်းသည်နှင့်ယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ superfood အဖြစ်ချီးကျူးသင့်ကြောင်းအဆိုပါတခုခုဖြစ်နေတာကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့ကောက်တက်ကိုဆက်ကပ်။ ဒါဟာလိင်စွဲ Non-တည်ရှိခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ယခင် "နိဂုံးပိုင်း" ကဲ့သို့အလားတူလိုင်းများတလျှောက်တွင်ဖြစ်ပြီး, လူအခြို့ရုံကောင်းတစ်ဦးအရာကိုပိုမိုလိုအပျကွောငျး။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအယူအဆကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းအောင်ကျင့်ကြံရန်စာရေးသူ၏ ဦး ဆောင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည် လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်သူမသည်လိင်စွဲလမ်းမှုကို“ အနတ္တ” အဖြစ်ရည်ညွှန်းရန်သူမ၏လက်မှတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူမ၏သုတေသနအားလုံးသည်ဘုံပုံစံနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ သူမသည်စိတ်မကောင်းစရာသုတေသနပြုနည်းစနစ်ကို အခြေခံ၍ မေးခွန်းထုတ်စရာအချက်အလက်များစုဆောင်းပြီးမြေကြီးလှုပ်ခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိလျှင်ကြေငြာသည်။
ငါမျိုး၏ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့နားလည်။ မကောင်းသောသုတေသနနှစ်ခုအကြားဆက်သွယ်မှုကိုသရုပ်ပြရန်ပျက်ကွက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိပ္ပာယ်သက်သက်သာသာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါဟာပျင်းစရာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ခေါင်းစဉ်များကိုရယူလိုပါက“ အချို့သောလူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်မိမိလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်ခြင်းကြားတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုမတွေ့ရပါ” ဟုသင်မပြောနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် Pan-Arabia Enquirer ရှိသရော်စာခေါင်းစီးကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလိမ့်မည် -“ မနက်စာအစီအစဉ်များပျက်ပြားပြီးနောက် Expat အတွက် ၀ မ်းနည်းကြေကွဲမှုများ!”
ဒါကြောင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကြောင့်ညစ်ညမ်းကစိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့မထောက်ပံ့မူသောသင်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်တကယ်ကောင်းလှ၏ "ကိုရှာတွေ့" သို့ morphs ။ ဤအ data ကိုအမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုအရာကိုအသုံးအနှုန်းများ၌ဤသုတေသနနှံ့နှံ့စပ်စပ်နဲ့ပက်ပက်စက်စက်ဝေဖန်မှုတစ်နံပါတ်နှင့်မဆိုမျိုးမျှမကောက်သူတို့ထံမှရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိခဲ့သည်။ သုည။
ဤဆောင်းပါးအား UCLA သုတေသီတစ် ဦး မှသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတစ်ခုဟုကြေငြာခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်သေပြသည့်အရာအားလုံးတွင်မှားသည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျဟုခေါ်ဆိုရန်အလွန်ခက်လွန်းပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဝေဖန်မှုများကိုသင်ကြည့်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ကြိုတင်အချက်အလက်များ၏ meta-analysis အတွက်ကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုအသုံးဝင်တဲ့နည်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာပေါင်းစပ်လို့ရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်။ ဤတွင်၎င်းကို“ ပွင့်လင်းစက္ကူ” ဟုခေါ်သည်။ နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်ဤအချက်အလက်များသည်ဒေါက်တာ Prause ၏ UCLA တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း၎င်းအဖွဲ့အစည်းနှင့်ယခင်ဆက်ဆံရေးသည်အဆုံးသတ်သွားပုံရသည်။
ဤသည်ဒါခေါ်လေ့လာမှုဒေါက်တာရစ်ခ် Isenberg MD, ထိုဂျာနယ်၏အယ်ဒီတာတစ်ဦးရှည်ဝေဖန်မှုတိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်သူအရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းအလှနျအံ့သွကြောင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖော်ပြထားခဲ့သူ Uro-မီးယပ်ကြားဖြတ်အမှုဆောင်အရာရှိဒါရိုက်တာစွဲသုတေသနများအတွက်အမေရိကန်ဖောင်ဒေးရှင်းအားဖြင့်ဖြိုဖျက်ခဲ့သ သက်တူရွယ်တူသုံးသပ်ရေးဤစာအုပျ၏ခံထိုက်ယုံကြည်သုတေသနဖြစ်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုတစ်ခုအတွက်အခြေခံအကျဆုံးနှင့်နားလည်လွယ်အသုံးအနှုန်းများအတွက်ဆိတ်ကွယ်ရာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ဆောင်းပါး Gabe Deem အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ porn-ED link ကိုထောက်ခံသည့်သုတေသနပြုမှုသည် ဖျောပွထားသညျ့ Porn ပေါ်မှသင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ။ မကြာသေးမီက Prause ဆောင်းပါးကိုလည်းထပ်မံရော့ Weiss LCSW ဒေါက်တာ Stefanie Carnes ကလာမည့်ဆောင်းပါးထဲမှာ rebutted ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းဖွစျလာနိုငျကွောငျးကိုသုတေသနများကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်၎င်းတို့၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီးယုံကြည်သော်လည်းထိုအဝေဖန်သူများအဘယ်သူအားမျှတစ်ဦးအတွေးအခေါ်ရှင်ဘက်လိုက်မှုရှိပြီးကြောင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအချို့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းအန္တရာယ်သယ်ဆောင်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်လူနာအချို့အားသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည်ဟုဆိုသောကျွမ်းကျင်သူများရှိသည်။ သို့သော်ဤအရာသည်ပင်လျှင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်စွဲလမ်းစေနိုင်ပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟူသောအချက်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ယူဆချက်နှစ်ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအမှန်တရားသို့မဟုတ်မဟုတ်မမှန်သည်အခြားတစ်ခုအားသက်သေပြခြင်းသို့မဟုတ်ငြင်းဆိုခြင်းမရှိသောကြောင့်သီးခြားစီစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
သင်ဤမြေတပြင်လုံးကိုတက်လက်သံစကားစစ်ထိုးပွဲအောက်ပါခဲ့ကြပါလျှင်, သင်အစစ်အမှန်လောကရှိရှယ်ယာမှာတစ်ခုခုရှိကွောငျးကိုသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါညစ်ညမ်း cheerleader သင်သည်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သူ Clinician နှင့်အေဂျင်စီများငွေ့၌နေသောယုံကြည်ကြပေသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူကိုကျွန်တော်တို့အများစုကြွယ်ဝသောရတဲ့ကြသည်မဟုတ်။
အဘယ်သူသည် is ငွေရတတ်သောသူရတဲ့? အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း။ ထိုအလမ်းဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်အင်တာနက်ပလက်ဖောင်းနှင့် app များကိုမှထုတ်ပြန်သော၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအဆင်သင့်သောအရာတို့ကိုရေးသားဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်နိုင်သည်သူကိုစာရေးဆရာများနှင့်သုတေသီများထွက်ရှာကြာလော့။ ငါသည်ငါ့အရေးအသား၌သူတို့ကိုရန်အဆင်သင့်တွေ့ရှိချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကိုအွန်လိုင်းချိတ်-Up ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ချဉ်းကပ်သောကြောင့်ငါသည်ဤငါတို့သိကြ၏။
ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအရွယ်အစားနှင့်အာဏာအကြားလိင်စွဲလမ်းမှုဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများသည်ဝေလငါးဖြစ်ပါကလိင်စွဲလမ်းမှုသည် paramecium ဖြစ်သည်။ လိင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အကြံပေးခြင်းများဆက်လက်လိုအပ်နေသည့်တိုင်၎င်းသည်မှန်ကန်သည် (ကျွန်ုပ်ကိုလည်းကြည့်ပါ တိုင် လိင်စွဲလမ်းမှုသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ လိင်စွဲလမ်းမှုကိုသာမေးပါ။ ငါ porn လိုလားသူသုတေသီများထုတ်သောဖောင်းပွအမျိုးအစားဝယ်ခြင်းနှင့်ပေးဆောင်ကြောင်းပြောပါသလား ရန်ပုံငွေမှမည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုမသိပါ။ ထိုအခါငါထိုကဲ့သို့သောဆောင်းပါးတစ်ခုမဟုတ်ရင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဂျာနယ်ထဲမှာသုံးသပ်သူများအတိတ်ဖြတ်သန်းဘယ်လိုစိတ်ကူးရှိသည်မဟုတ်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်ရလဒ်လှုံ့ဆျောမှု၏မလှည့်စားခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။